नजिर हुसेनले लेखे मार्मिक पत्र : बिहेमा श्रिकृष्ण श्रेष्ठ आउन मिल्ने भए यसो भन्थे होला…पूरा पढ्नुहोस् । – yuwa Awaj
मंग्सिर २३, २०७७ मंगलबार 10
काठमाडौँ : अभिनेत्री श्वेता खड्का हिजो विवाह बन्धनमा बाँधिएकि छन् । उनी धनगढीका विजयेन्द्र सिंह रावतसँग विवाह बन्ध’नमा बाँधिन लागेकी हुन् । उनको विवाह काठमाडौँस्थित गोकर्ण फरेष्ट रिसोर्टमा सम्पन भयो ।
उनले यसअघि वि.सं २०७१ साल असार २३ गते अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग विवाह गरेकी थिइन् । बिहे भएको करिब एक महिनापछि श्रीकृष्णको नि’धन भएको थियो । बिहेको एक दिन अगाडि नायिका खड्काको मे’हेन्दी सेरे’मोनी आयोजना गरिएको थियो । मेहेन्दी सेरेमोनीमा नायिका स्वेता खड्का र विजयेन्द्र सिंह राउत रमाएको देख्न सकिन्छ ।
म’रेको शरिर चि’तामा ज’लाइसकेपछि उठेर आउने भए प्रिय श्वेता म तिम्रो बिहेमा उपस्थित हुने थिए होला ।अग्नि साचि राखेर केहि आफन्त हरु समेत लाइ दर्शक राखेर सात फेरा हालेर जुनि जनि सम्म साथ दिने कसम खादा त म पनि थिए नि । तर बि’डम्बना मैले त बाचा पुरा गर्न सकिन नि ।
मैले धर्तिमा आएपछि पक्कै पनि सुन्ने छु होला । मेरो मृ’त् शरिरमा तिम्रा ति नि’र्दोष आखाबाट खसेका बलि’न्धारा आ’शु कति थियो भनेर । आफ्नै ज्या’न नि’यन्त्रणमा लिन नसकेकि तिमि मेरो मायामा पाग’ल भएर यसो भनेको थिइ नि यसले भनेर सुन्छु होला सुनाइन्छ होला । ” म अब कोहि सग बिहे गर्दिन”” यो शब्द पनि मैले सुन्छु होला ।
तिम्रो हरियालि जिन्द’गिलाइ उजा’ड बनाउने म अझै पनि मलाइ नै सम्झेर बसेकि छ्याै होला । अमुल्य जिबनको धेरै बर्ष मेरा नाममा तिम्रा आखा बाट खसेका आशुको मुल्य म कसरि ति’राे???हात पा’खुरा गलेका तिम्रा ति अ’ङ्गहरु सग मैले कसरि माफि मागाै । मलाइ पनि अनुभव गर्न मन छ!! पा’पको स’जाय पाउन मन छ!!!
सगै सगै जिन्दगि कटाउछु भनेर बाचा कसम खाएको मान्छे एक्कासि बिच बाटो बाट नै अल’पत्र हुदा कस्तो र कति पिडा हुन्छ त्यो मलाइ अनुभव गर्न मन छ । तिम्रो ठाउमा म भएको भए!! केहि समय पछि बिर्सने थिए होला । अर्कै सग फेरि सात जुनिको कसम खाएको हुने थिए होला । तिमिले त कसरि सक्याै !!! यतिका बर्ष सम्म मृ’त शरिरलाई सम्झेर!!! कति मन अमिलो बनाएर अझै एक्लै पि’डा सहेर बस्छ्याै ।
म त तिमिलाई” धर्तिमा आउन मिल्न भए यो भन्ने थिए””” गर बिहे । यत्रो दिन सम्म एक्लै पारेको तिमिलाई समाजमा लाग्ने ला’ल्छान सबै म खान तयार छु!!! तिमिलाई यदि कुनै पाप लागेछ भने म भोग्न तयार छु! कम से कम मेरो पापको भारि कम होला ! तिम्रो बिहेमा त मेरो आखाबाट केहि दिन सम्म आशु झ’र्ला!!! तर तिमिले मेरो नाममा यतिका बर्ष सम्म झारेका आशुको अगाडि सायद धेरै नै कम नै हुन्छ होला ।
जुनि कटाउछु भनेर खाएको कसम तोडिका कस्तो हुन्छ??? त्यो अनुभन मैले पनि पाउनु पर्छ । एक्लै यतिका दिन सम्म एक्लै हुदा कस्तो हुन्छ त्यो मैले पनि भोग्न पर्छ । त्यसैले स्वेता गर बिहे बितेको पि’डालाइ भुल्न बर्तमान मा खुसी हुन र भबिस्यमा उ’त्कृष्ट कार्यको सुरुवात को निम्ति हजुर लाई बधाई सफल जिवनको शुभकामना ।
‘मैले मृ’त्युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें’ जीवनको नयाँ अध्याय शुरु गर्नु अघि अभिनेत्री श्वेताको चिठ्ठी
अभिनेत्री श्वेता खड्काले आफु जीवनको नवीन यात्रामा रहेको बताएकी छन् । आज सोमबार दो’स्रो वि’वाह गर्न लागेकी उनले विवा’हको पू’र्वसन्ध्यामा लामो स्ट्याटस लेख्दै जीवनका बिभिन्न आरोह अवरोह, उकाली ओराली, सुख दुःख अनि हाँसो’रोदनका पलहरुलाई आत्म’सात गर्दै आज जिन्दगीको अर्को एउटा मोडमा उभिएको बताएकी छन् ।
जिन्दगीको यो मोडसम्म आईपुग्दा मैले जे जस्ता पिर,ब्यथा, दुःख अनि क’ष्टहरुसँग सामना गरेकी छु, त्यस भित्रको कहा’लीलाग्दो अनुभवहरुलाई शब्दमा बयान गर्न पनि अस’मर्थ छु’ उनले अगाडि लेखेकी छन् ‘अचानोको पी’डा खुकु’रीलाई थाहा हुन्न् भनेझैं समयको दुस्च’क्रले म माथि प्रहार गरेको अनेकन प्र’हार र त्यसबाट मैले भो’गेको पी’डाहरु केवल मलाई मात्र थाहा छ ।’
केही दिनअघि वि’वाहको समाचार मिडियामा आएपनि अहिलेसम्म मौन रहेकी उनले आइतबार भने स्टाटस मार्फत मुख खोलेकी हुन् । जिन्दगीको लामो बाटोमा तिखा काँ’डा, ठुलाठुला प’त्थर अनि आ’गोको ज्वा’लाहरु छरप’स्ट भएर छरिएको अनुभव गरेकी उनले जीवनबाट सबै अ’प्ठ्यारा पन्छाउन वि’वाह गर्न लागेको समेत स्टाटसमा उल्लेख गरेकी छन् ।
उनले स्टाटसमा लेखेकी छन्– ‘कि हुती हारेर मर्नुपर्छ, कि त हिम्मतका साथ अघि बढ्नुपर्छ । अतः मैले मृ’त्युलाई रोजिनँ, जीवनलाइनै रोजें । अनि जिन्दगीका हरेक स’मस्याहरुसँग जुध्दै क्रमशः अगाडि बढ्दै गएँ ।’ एक्लै जीवन काट्न सकिन्छ भन्ने क’ठोर निर्ण’य लिएर विगत ६ वर्षदेखि एक्लै हिँडिरहेको बताएकी स्वेताले एकल यात्राका बख’तमा धेरै पटक लडे’को समेत बताएकी छन् ।
अभिनेता श्रीकृष्ण श्रेष्ठसँग प्रे’म बि’वाह गरेकी स्वेता श्रीकृष्णको नि’धनपछि एक्लै जीवन बिताउँदै आएकी छन् । श्रेष्ठको नि’धनलगत्तै गहिरो शो’कमा डुबेकी उनले सो समय अब जीवनभर वि’वाह नगर्ने अभिव्यक्ति समेत दिएकी थिइन् । अहिले भने जीवनलाई पी’डाबाट निकाल्न बि’वाह गर्न लागेको बताएकी छन् । उनले आफ्नो जीवनलाई सांकेतिक रुपमा प्रस्तुत गर्न रंगिन र ब्ल्याकिन ह्वाइट तस्बिर समेत एकसाथ पोष्ट गरेकी छन् ।
Prevडा.बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ : हाम्रो पुस्ताले लडेर ल्याएको गणतन्त्रको रक्षा गर्न नाति पुस्ता जन्मिसकेको छ !
Nextसांसद शान्ता चौधरी भन्नुहुन्छ : नेताहरुको ध्यान राष्ट्र निर्माणको एजेण्डामा नभई पद प्राप्तिका,लागि मात्रै केन्द्रित देखियो !